12 Cunto Oo Daalka Kaa Ilaalinaya Energy Badana Laga Helo - Daryeel Magazine
12 Cunto Oo Daalka Kaa Ilaalinaya Energy Badana Laga Helo
Jariidada Daily mail ee kasoo baxda cariga England ayaa qortay maqaal ku aadan cunnooyinka faa’idada u ah caafimaadka aadanaha gaar ahaan kuwa tamarta laga helo.
Maqaalkan ayaa lagu xusay in qumbaha uu yahay mid laga heli karo tamar aad u badan.
Sido kale maqaalkan ayaa lagu xusay in aad iska yareyso cusbadda iyo sonkorta taasoo kugu keeni karta daal faro badan iyo cuduro ay ka mid yihiin dhiig karka iyo sonkorowga,
warbixintan ayaa lagama maarmaan ku tilmaamtay in uu qofka u baahan yahay ugu yaraan maalinkii 250ml oo caano saafi ah taasoo jirka uu ka heli karo macdanta loo yaqaano Calcium-ka.
Cunoyinka ugu muhiimsan ee warbixintaani lagu xusay ayaa waxaa ka mid ah timirta iyadoo la sheegayna in aadanahu uu ka heli kaaro magniisiyoomka iyo vitamiinada kala ah C iyo D
Ukunta ayaa la xaqiijiyay inay ka mid tahay cuntooyinka tamarta badan laga helo, waxayna hodan ku tahay Vitamin Bs iyo weliba Vitamin D oo u wanaagsan ilaalinta caafimaadka lafaha, inta waxaa dheer ukuntu waxay ka mid tahay ilaha wanaagsan ee laga helo protein-ka. si aad energy fiican u heshid ugu yaraan 1 ukun ah cun subax kasta xiliga quraacda
Akhriso: 5 Faaido oo dhanka caafimaadka ah oo laga helo ukunta
Tufaaxu Wuxuu leeyahay maadooyinka muhiimka sida Vitamin A Vitamin C Vitamin E iyo Vitamin K marki loo fiiriyo vitamiinadan oo dhan ayaa waxay ka dhigantaa in ay ka kaalmeyso in uu jirka helo awood fara badan. Sidoo kale, Tufaaxu wuxu leeyahay macdanta loo yaqaano potassium, calcium, phosphorous, iyo iron.
Cuntooyinka kale ee daraasadu xustay ee laga helo firfircoonida iyo tamarta badan waxaa ka mid ah, qamadiga ama sarreenka, caanaha garoorka ah ee loo yaqaan Yougurt, biyaha caadiga ah, liinta, digirta, spinach-ka iyo kalluunka nooca loo yaqaan Salmon
Akhriso: 9 faaido oo laga helo cunista kalluunka nooca Salmon
Cunnooyinkan ayaa lagu sheegay in qofka isticmaalaa ay u horseedi karaan in jirkiisa uu noqdo mid dheelitiran isla markaana caafimaadkiisa uu noqonayo mid taam ah.